आइतबार अप्रिल 11, 2021 |
आइतबार अप्रिल 11, 2021
विषय — के पाप, रोग, र मृत्यु वास्तविक हो?
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: भजनसंग्रह 91 : 9, 10
“"तपाईलाई प्रभुले भरोसा दिनुहुन्छ। हामी तपाईको सुरक्षाको लागि बनेका छौ। तपाईलाई केही नरा हुन सक्छ।"”
उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 91 : 11-16
13 तिमीहरूले सिंहहरूमाथि र विषालु सर्पहरूमाथि हिंड्ने शक्ति पाउनेछौ।
14 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यदि कुनै मानिसले ममा भरोसा गर्दछ भने, म उसलाई बचाउने छु जसले मेरो नाउँलाई उपासना गर्दछ म मेरो भक्तजनहरूलाई रक्षा गर्नेछु।
16 अनि मेरा भक्तजनहरूलाई दीर्घायु दिनेछु अनि तिनीहरूलाई बचाउनेछु।
1. उत्पत्ति 1: 1, 26 (तिर :), 27, 28 (तिर :), 31 (तिर 1st.)
1 आरम्भमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नु भयो।
26 तब परमेश्वरले भन्नुभयो, अब हामी मानिस सृष्टि गरौं। हामी मानिस हाम्रै स्वरूप बनाउनेछौं र मानिस हामी जस्तै हुनेछन्। तिनीहरूले जलचर, नभचर, स्थलचरमा ठूला साना अनि घस्रने सबै प्राणीहरूमाथि शासन गर्नैछन्।
27 यसर्थ परमेश्वरले आफ्नै प्रतिरूपमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा मानिसलाई सृष्टि गर्नु भयो। उहाँले पुरुष र स्त्री सृष्टि गर्नुभयो।
28 परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिंदै भन्नुभयो, धेरै सन्तानहरू उत्पति गराऊ र पृथवी भरेर तिनीहरूको हेरचाह गर। समुद्रका माछाहरू, आकाशमा उड्ने चराहरू अनि पृथ्वीमा हिँड्डुल गर्ने, सबै प्राणीहरूमाथि शासन गर।
2. भजनसंग्रह 68 : 20
20 उहाँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु हुन्छ।
3. यूहन्ना 8: 1-11
1 येशू जैतून डाँडामा जानुभयो।
2 बिहानै येशू मन्दिर तर्फ फर्कनुभयो। सबै मानिसहरू येशूकहाँ आए। येशू बस्नु भयो र तिनीहरूलाई सिकाउनु भयो।
3 शास्त्रीहरू र फरिसीहरूले एकजना आइमाईलाई त्यहाँ ल्याए। त्यस आइमाईले व्यभिचार गरिररहेको बेला समातिएकी थिई। ती यहूदीहरूले त्यस आइमाईलाई बलजफ्ती जनसमूह समक्ष ल्याए।
4 तिनीहरूले येशूलाई भने, “गुरूज्यू, यस आइमाई पर-पुरुषसँग व्याभिचार सम्बन्धमा रहेको बेला समातिई।
5 मोशाको व्यवस्थाले आज्ञा गर्दछ कि यस्तो आइमाईलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु पर्छ। अब तपाईं के भन्नु हुन्छ?
6 यहूदीहरूले येशूलाई जालमा पार्नुका निम्ति त्यस्ता प्रश्नहरू गरिरहेका थिए। तिनीहरू येशूले गल्ती कुरा गरोस् भन्ने चाहन्थे ताकि तिनीहरूले उहाँलाई आरोप लगाउन सकुन। तर येशू निहुरनु भयो र आफ्नो औंलाले जमीनमा लेख्न थाल्नु भयो।
7 यहूदीहरूले लगातार त्यही प्रश्न येशूलाई सोधिरहे। तब येशू उभिनु भयो अनि भन्नुभयो, तिमीहरू माझमा कुनै एक मानिस जो पाप रहित छ त्यो मानिसले उसलाई प्रथम ढुङ्गा हान्नुहोस्।
8 तब फेरि येशू निहुँरनु भयो र जमीनमा लेख्नु भयो।
9 जब येशूले भनेको तिनीहरूले सुने तिनीहरू एक पछि अर्को गर्दै त्यहाँबाट जान थाले। बूढा मानिसहरूले पहिला छाडे र त्यसपछि अरूअरूले छाड्दै गए। येशू एक्लो छाडिनु भयो त्यस आइमाईसँग। त्यस आईमाई उहाँ समक्ष उभिरहेकी थिई।
10 येशू उठनु भयो अनि तिनलाई सोध्नु भयो, नारी, तिनीहरू कहाँ छन्? तिनीहरू कसैले तिमीलाई दोषी ठहराउन सकेनन्?
11 उसले भनी, महोदय, मलाई कसैले दोषी ठहरयाउन सकेन। तब येशूले भन्नुभयो, तब म पनि तिमीलाई दोषी ठहरयाउँदिन, तिमी जान सक्छौ, तर फेरि पाप नर्गनू।
4. रोमी 6: 12-14, 23
12 यसकारण पापलाई तिमीहरूको पार्थिव जीवन नियंत्रण गर्न नदेऊ। तिम्रा पापपूर्ण स्वभावलाई तिमीमा राज गर्न दिनु हुदैन जसले तिमीलाई उसको इच्छा अनुसार कर्म गर्न लगाउँछ।
13 तिम्रा शरीरका अंगहरूलाई पापर्कम र दुष्टकर्महरू गर्नलाई अर्पण नगर। बरू आफू मृत्युबाट जिउँदो भएको कारण स्वयंलाई परमेश्वरप्रति समर्पित गर। राम्रो कामको लागि तिम्रा शरीरका अङ्गग परमेश्वरको सेवामा अर्पण गर।
14 पाप तिम्रो स्वामी हुनेछैन। किनभने तिमी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ। तिमीहरू अब परमेश्वरको अनुग्रहमा छौ।
23 जब मानिसहरूले पाप गर्दछन्, तिनीहरूले पापको ज्याला कमाउँछन् जो चाँहि मृत्यु हो। तर परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई मूल्य रहित उपहार दिनु हुन्छ जुन हाम्रा ख्रीष्ट येशू प्रभुमा अनन्त जीवन हो।
5. यूहन्ना 9: 1-3, 6, 7
1 जब येशू हिंडिरहनु भएको थियो, उहाँले एकजना अन्धो मान्छेलाई देख्नु भयो। त्यो मान्छे जन्मैदेखि अन्धा थियो।
3 येशूले उत्तर दिनुभयो, “यो न त उसको न त उसकी माताको पापहो जसले उसलाई अन्धा जन्माइन्। ऊ जन्मैदेखिको अन्धो हो ताकि उसलाई निको पारेर मानिसहरूलाई परमेश्वरको शक्ति देखाउन सकियोस्।
6 यसो भनिसकेर, येशूले भूँईंमा थुक्नु भयो र त्यसबाट केही माटोको हिलो बानाउनु भयो अनि येशूले त्यसलाई त्यस मानिसको आँखामा दलिदिनुभयो भयो।
7 येशूले त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, जाऊ सिलोआमाको तलाउमा गएर पखाल (सिलोआमको अर्थ हुन्छ पठाउनु) तब त्यो मानिस तलाउमा गयो र धोयो। अब ऊ देख्ने लायकको भयो।
6. मत्ती5: 2, 17, 18
2 उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउन थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
17 म मोशाको व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूद्वारा लेखिएको अगमवाणी रद्द गर्न आएको भन्ने नसम्झ, रद्द गर्न होइन, तर पूरा गर्न म आएको हुँ।
18 म साँच्चो भन्दछु, जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जाँदैन, व्यवस्थाको हरेक कुरा पूरा हुनेछ सबै कुरा पूरा नहोउन्जेल कुनै किसिमले व्यवस्थाबाट एउटा मात्रा वा एउटा बिन्दु पनि हटाइने छैन।
7. प्रेरित4: 33
33 प्रभु येशूको मृत्युबाट पुनरुत्थान भएको बारेमा प्रेरितहरूले ठूलो शक्तिसँग गवाही दिए। अनि परमेश्वरले सबै विश्वासीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो।
8. प्रेरित 5: 12, 14-16
12 प्रेरितहरूले मानिसहरू माझ अनेक चमत्कारहरू अनि आर्श्चयमय कार्यहरू गरे। प्रेरितहरू एकैसाथ सुलेमानको दलानमा थिए। तिनीहरू सबैको एउटै उद्देश्य थियो।
14 अनि धेरै मानिसहरू, पुरुषहरू र स्त्रीहरूले प्रभुमा विश्वास गरे अनि विश्वासीहरूको टोलीमा सामेल भए।
9. प्रेरित 20 : 7-12
7 सप्ताहको पहिलो दिन, हामी सबै प्रभुको भोज खान एकत्रित भयौं। पावलले अर्को दिन विदा लिने सम्झी तिनीहरूसँग बात मारे। पावलले मध्यरात सम्म गफ जारी राखे।
8 हामी माथिल्लो तलामा जहाँ भेला भएका थियौं। त्यहाँ धेरै बत्तीहरू झिलिमिलि बलिरहेको थियो।
9 त्यहाँ एक युटाइकस नाउँको युवा थियो जो झ्यालमा बसिरहेको थियो। पावल गफमा मस्त थिए, अनि युटाइकसलाई निद्राले ग्रस्त पार्यो। अन्तमा, युटाइकस त्यही निदायो अनि तेस्रो तल्लाको झ्यालबाट भूइँमा पछारियो। जब मानिसहरू उसलाई उठाउन गए तब ऊ मरिसकेको थियो।
10 पावल युटाइकस कहाँ ओर्लिए। उनले घुँडा टेकेर अगाँलो हाले। पावलले अन्य विश्वासीहरूलाई भने, सुर्ता नगर, यिनी जिउँदै छन्।
11 पावल फेरि माथिल्लो तल्लामा गए। उनले रोटी टुक्राए अनि खाए। पावल तिनीहरूसँग धेरै बेरसम्म कुरा गरिरहे। उनको गफ सकिन्दा मिर्मिरे बिहान भइसकेको थियो। त्यसपछि पावल गए।
12 मानिसहरूले त्यस युवकलाई लिएर घर गए। ऊ जिउँदै थियो अनि तिनीहरूलाई आराम भयो।
10. प्रेरित 26 : 8
8 तपाईंहरूलाई परमेश्वरले मरेको मानिसहरू बौराउँनु हुन्छ भन्ने कुरा ग्रहण गर्न किन अप्ठेरो परेको?
11. लूका 1 : 37
37 किनभने परमेश्वरमा जे कुरा पनि सम्भव छ। ﻿
सबै थोक परमेश्वरकै काम हुन्, र सबै कुरा राम्रो छ।
उहाँ कसरी हुन सक्नुहुन्थ्यो, किनकि आत्मिक सृष्टि उहाँको असीम आत्म-संयम र अमर बुद्धिको विस्तार हो, उत्पत्ति थियो?
सबै कुरा राम्रो वा योग्य, परमेश्वरले बनाउनुभएको हो। जे बेकार वा बेमानी हो, उसले बनाएन, त्यसैले यसको अव्यावहारिकता। उत्पत्तिको विज्ञानमा हामी पढ्छौं कि उनले आफूले बनाएका सबै चीजहरू देखे, "र हेर, यो एकदम राम्रो थियो।" शारीरिक इन्द्रिय अन्यथा घोषणा; र यदि हामी त्रुटिको इतिहासलाई सत्यको अभिलेखमा पनि त्यस्तै ध्यान दियौं भने, पाप र मृत्युको धर्मशास्त्रीय अभिलेखले भौतिक इन्द्रियहरूको गलत निष्कर्षलाई समर्थन गर्छ। पाप, बिमारी र मृत्युलाई वास्तविकताबाट वंचित मान्नुपर्दछ किनकि ती असल छन्।
रोगबिमार, पाप, र मृत्यु, निष्ठुर भएर, उहाँ भगवानबाट उत्पन्न हुनुहुन्न र न उहाँको सरकारको। उसको कानुनले ठीकसँग बुझेको खण्डमा तिनीहरूलाई नष्ट गर्दछ। येशूले यी भनाइहरूको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुभयो।
5. 11 : 9-21
क्रिश्चियन विज्ञानको शारीरिक उपचारको परिणाम येशूको समयमा जस्तै ईश्वरीय सिद्धान्तको संचालनबाट प्राप्त भएको छ, जस अघि पाप र रोगले मानव चेतनामा आफ्नो वास्तविकता गुमाउँछ र प्राकृतिक रूपमा अदृश्य हुन्छ र अन्धकारले प्रकाशलाई सुधार गर्दछ र पापलाई सुधार गर्दछ। । अब, त्यस पछि, यी शक्तिशाली कार्यहरू अलौकिक होइन, तर सर्वोच्च प्राकृतिक हो। ती इम्मानुअल, वा "हामीसँग परमेश्वर" को चिन्ह हो - ईश्वरीय प्रभाव मानव चेतनामा कहिल्यै उपस्थित हुन्छ र आफैलाई दोहोर्याउँदछ, अब आउँदछ जुन यस अघि आगाडि गरिएको थियो।
अपहरणकारीहरूको [अर्थको] उद्धारको प्रचार गर्न,
र अन्धालाई फेरि देख्न,
चोट छ कि स्वतन्त्रता मा सेट गर्न।
परमेश्वरले बिमारी र मृत्यु पठाउनुको सट्टा, उहाँ तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ र अमरत्वको प्रकाश ल्याउनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान र अनंत दिमागले सबै बनायो र सबै समावेश गर्दछ। यो दिमागले गल्ती गर्दैन र पछि तिनीहरूलाई सुधार गर्दछ। परमेश्वरले मानिसलाई पाप गर्न, बिरामी हुन वा मर्न लगाउनुहुन्न।
यो असम्भव छ कि मानिसले वास्तविक कुरा गुमाउनुपर्दछ, जब परमेश्वर सबै र सदाका लागि हुनुहुन्छ। यो धारणा हो कि दिमाग महत्त्वपूर्ण छ, र तथाकथित सुखविलास र पीडा, जन्म, पाप, बिमारी र पदार्थको मृत्यु, वास्तविक हो, यो एक नश्वर विश्वास हो; र यो विश्वास कहिल्यै हराउने छ।
बुबा सिद्ध हुनुभएझैं मानिस पनि सिद्ध छ किनकि बुबा सिद्ध छ, किनकि आत्मिक मानिसका आत्मा, वा दिमाग, परमेश्वर हुनुहुन्छ, सबै प्राणीहरूको ईश्वरीय सिद्धान्त, र किनभने यो वास्तविक मानिस सोलको अन्तर्गतको हो, विवेकको सट्टामा, आत्माको कानून द्वारा, मामला मा तथाकथित कानून द्वारा होईन।
दुष्ट सर्वोच्च छैन; असल असहाय हुँदैन। न त भौतिक तथाकथित कानूनहरू प्राथमिक हुन्छन्, र आत्माको व्यवस्था गौण हुन्छन्। यो पाठ बिना, हामी सिद्ध पिता, वा मानिसको ईश्वरीय सिद्धान्तको दृष्टि हराउँछौं।
येशूले रोगलाई कहिल्यै खतरनाक वा निको पार्न गाह्रो जस्तो कुरा गर्नुभएन। जब उनका विद्यार्थीहरू उहाँकहाँ एक मुद्दा ल्याए उनीहरू निको हुन असफल भए, तब उनले तिनीहरूलाई भने, "हे अविश्वासी पुस्ता," निको पार्ने आवश्यक शक्ति दिमागमा थियो भन्ने संकेत गर्दै। उनले कुनै औषधि तोकिदिएन, भौतिक कानूनहरूप्रति आज्ञाकारिताको आग्रह गरेनन्, तर उनीहरूको सीधा अनाज्ञाकारितामा काम गरे।
येशूले विज्ञानमा एक सिद्ध मानिस देख्नुभयो, जो उहाँ कहाँ देखा पर्नुभयो जहाँ पापी मानिस मर्दछ। यस सिद्ध मानिसमा मुक्तिदाताले परमेश्वरको आफ्नै समानता देख्नुभयो, र मानिसप्रति यो सही दृष्टिकोणले बिरामीहरूलाई निको पारे।
ईश्वरीय सत्य, जीवन र प्रेमले येशूलाई पाप, बिमारी र मृत्युमाथि अधिकार दियो। उनको उद्देश्य ईश्वरीय प्राणीहरूको विज्ञान प्रकट गर्नु थियो, परमेश्वर के हुनुहुन्छ र उहाँले मानिसका लागि के गर्नुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्न।
हाम्रो मास्टरले कुनै सिद्धान्त, सिद्धान्त वा विश्वास सिकाएन। यो उसले सिकाउने र अभ्यास गर्ने सबै वास्तविक प्राणीको ईश्वरीय सिद्धान्त हो।
आफैलाई पापको तुलनामा उच्च तुल्याउनु, किनकि परमेश्वरले तपाईंलाई यसभन्दा उच्च बनाउनुभएको छ र मानिसमाथि शासन गर्नुहुन्छ, साँचो बुद्धि हो। पापसँग डराउनु भनेको प्रेमको शक्ति र ईश्वरीय विज्ञानको परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा रहेको कुरालाई गलत अर्थ लगाउनु हो - उहाँको सरकारलाई शंका गर्नु र उहाँको सर्वशक्तिमान हेरचाहमाथि अविश्वास गर्नु। आफैलाई बिरामी र मृत्युभन्दा माथि राख्नु बराबर बुद्धिमानी हो, र ईश्वरीय विज्ञानको अनुरूप छ। उनीहरूलाई डराउनु असम्भव छ, जब तपाईं पूर्ण रूपमा परमेश्वरलाई समात्नुहुन्छ र जान्नुहुन्छ कि उहाँ सृष्टिको कुनै अंश हुनुहुन्न।
हाम्रो गुरुले भूतहरू निकाल्नुभयो र बिरामीहरूलाई निको पार्नुभयो। यो पनि उनका अनुयायीहरूको बारेमा भन्नु पर्दछ, कि तिनीहरूले आफू र अरूबाट डर र सबै नराम्रा कुराहरू निकाल्छन् र बिरामीहरूलाई निको पार्छन्। परमेश्वरले मानिसद्वारा बिरामीहरूलाई निको पार्नुहुनेछ, जब पनि मानिस परमेश्वरद्वारा शासित हुन्छ। सत्यले १ centuries शताब्दीअघिको जत्तिकै त्रुटि हटाउँछ।
यदि बिरामी सत्य हो वा सत्यको विचार हो भने, तपाईं बिमारीलाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्न, र यो प्रयास गर्न ब्यभिचारिक हुनेछ। त्यसोभए बिरामी र गल्तीलाई हाम्रा मालिकले जस्तै वर्गीकृत गर्नुभयो, जब उहाँ बिरामीको बारेमा बोल्नुहुन्छ, "जसलाई शैतानले बाध्य पारेको छ" र मानव विश्वासमा काम गर्ने सत्यलाई जीवन दिने शक्तिमा गल्तीको लागि एक सार्वभौम औषधि पत्ता लगायो, जसले एक जेल खोल्दछ। ढोकाहरू जस्तै बाँधिएका छन्, र शारीरिक र नैतिक रूपमा बन्धकलाई नि: शुल्क सेट गर्दछ।
जब बिरामी वा पापको भ्रमले तपाईंलाई लोभ्याउँछ, तब परमेश्वर र उहाँको धारणामा स्थिर रहनुहोस्। उहाँको समानता बाहेक अरू केहि पनि तपाईंको विचारमा रहन दिनुहोस्।
रोगको असीमित वा उन्नत चरणहरूमा अन्धो र शान्त प्रस्तुतीको सट्टा तिनीहरूको विद्रोहमा उठ्नुहोस्।
पाप वा बिमारीको कुनै दावा सोच्न मा बढ्न को लागी सहन। यसलाई अमिल्दो विश्वासका साथ खारेज गर्नुहोस्, किनकि तपाईंलाई थाहा छ कि उहाँ पापको बारेमा भन्दा रोगबिमारको लेखक हुनुहुन्न। पाप वा रोगको आवश्यकतालाई समर्थन गर्न तपाईंसँग उहाँको कुनै कानून छैन, तर त्यो आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न र बिरामीहरूलाई निको पार्ने ईश्वरीय अधिकार तपाईंसँग छ।
दिमाग शारीरिक शारीरिक इन्द्रियको मालिक हो, र बिमारी, पाप, र मृत्युलाई जित्न सक्छ। यो ईश्वर-प्रदान अधिकार प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंको शरीर लिनुहोस्, र यसको भावना र कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। सबैको प्रतिकार गर्न आत्माको शक्तिमा उठ्नुहोस् जुन राम्रो कुराको विपरित छ। परमेश्वरले मानिसलाई यसको योग्य बनाउनुभएको छ, र कुनै पनि कुराले क्षमता दिईएको छैन र ईश्वरीय रूपमा मानिसमा दिईएको शक्तिलाई।